Kooxda Sudhayo oo ku Wareersan Been Abuurka Jaaliyadaha, Iyada oo aan la Garanayn Wax ku Kalifaya – Rasaasa News
Jun 30, 2009 Jwxo-shiilada, Sudhayo
Kooxda Sudhayo oo sidii aanu horeba idinku sheegnay ah koox eegga uun idhaha furtay kuna indha furtay beenta kooxda Jwxo-shiilo oo iyadu miciin mooday beenta aan sal iyo raad toona lahayn ee ay ku afuufayso caruurta iyo haweenka uu guurka ka xumaaday.
Kooxda sudhayo oo soo bixitaankeeda ay dadka ugu horeysay xiligii ay guul daradu halganka Somalida Ogadeeniya u soo hoyatay [waa kolkii uu dhacay dilka xubnaha ONLF], kooxda Sudhayo waxaa la cadeeyey in ay isugu jiraan dhawr nooc, saraakiil gabowday [pension] oo ahaa ciidamadii Somaliya oo iyagu isu urursaday in ay qaaraanka lacag ka helaan, Muqayiliin Nolosha ka dhacay,qaar qaba cuqdad qabiil [inferiority complexity] iyo qaar Doqomo ah oo iyagu ah kuwo aan bulshada meeqaan ku lahayn.
Dadkan oo kol ay dhacday mooyee uu dhabarka ka taabtay dambiile Jwxo-shiil isaga oo la kaashaday kooxda aadka ugu shaqaysa isaga Jwxo-shiilada. Sudhay xiliga wax dhagta loogu shubay waxay ahayd xiliyadii 2007/8, xiligaas oo ay shacabka isu celiyeen labada cadow waa Ina Iley iyo Jwxo-shiil, oo mar la kala garan waayey in ay iska soo horjeedaan iyo in ay isku dhinac wax u wadaan.
Xiligaas oo Jwxo-shiil ay ooda u jiidayeen kooxda Jwxo-shiilada iyaga oo todobaad walba boggaga Internetka ku soo qori jiray in ay shir qabteen iyaga oo sawiro haween iyo caruur ku soo dhajin jiray boggaga Internetka oo ay ka soo qaadaan haweenka [caruurta ku qoraxaysta beeraha waaweyn ee dalalka reer galbeedka]. Sawirada waxaa kale oo ku soo bixi jiray iyaga oo la hadlaya haweenka iyo caruurta kuwa ay ugu yeedhaan Samatar soo kac.
Hadaba, kolkii la caarifay kooxda Jwxo-shiilada, ayaa waxaa hada bilaabay in shaqadii ay qabaan mar kale u noqoto kooxda Sudhayo, Sudhayo oo iyadu aad uga xirfad yar kooxda Jwxo-shiilada ayaa la daalaa dhacaya arimihii Jaha wareerinta ee Jwxo-shiil uu kula dhex jiray ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaa la sheegayaa in kooxda Sudhayo loo sheego in ay ka dhex shaqeeyaan bulshada dhexdeedda si ay u kala Jabiyaan ummada. Hadaba kooxdani kolka ay afar qof isugu yeedhaan qol ayaa waxay dadka u sheegaan in aan sawir la qaadi karin kooda mooyee, hadana iyaga laftigooda [sudhayo] ayaa diidaan in xitaa sawiro laga qaaday la soo galiyo boggaga baalxooftada ee u adeega Jwxo-shiil.
Waxaan aad ula yaabaa ruux is xankooraya oo leh danta guud baan wadaa oo halgan baan wadaa, hadana diidaaya in taswiir laga qaado aan idin waydiiyee ma dal buu u halgami, maya weeye [raacdadu hay kaa dhabtahay dheeha olalkeedu adoo dhididsan baa loo ridaa dhamac rasaaseede].
Hadaba, waxaanu si daacad ah oo ay wadaniyadi ku jirto ugu sheegaynaa dadweynaha Somaliyeed Ogadeeniya, gaar ahaan kuwa ka xoogsada dalalka reer galbeedka in ayna danahooda luminin, waana in ay iska daayaan garab wagliilka dhaxdooda ah, beenta ay isku maaweelinayaan iyo toxonbadhinta waa tii la odhan jiray [haduu hadal wax tari Warsame hadali baa hadal Geeliisii ku dhacsan lahaa].
Baal xoofto iyo kolba haween isla sawirid hadii wax lagu keeni Jwxo-shiil baa wax ku keeni lahaa, kolkii uu xaqii garab marayna waa kaas geeri iyo nolol la la,a yahay meel alaale meel uu jiro ee ay habeen walba hoos u oy haweenaydiisii.